Gọọmenti rụrụ na New York | Akụkọ Njem
Ndị gọọmenti rụrụ na New York
New York Ọ bụ otu n’ime nnukwu obodo ụwa ma enwere ndị hụrụ ya n’anya nke ukwuu nke na ha anaghị akwụsị ịlaghachi na ịlaghachi azụ. Ọ bụghị kpọmkwem obodo dị ọnụ ala ma yana ụfọdụ atụmatụ ọ ga-ekwe omume ịghara itinye nnukwu ego.
Mgbe ọ bịara chekwaa ulo Ọ na-agbagwoju anya: ịchekwa nri dị mfe, mana ịchekwa ohiri isi gị na-efu ntakịrị. Ọ bụ mgbe ahụ backpacker gọọmenti rụrụ ha na-enyere anyị aka. Enwere gọọmenti rụrụ na New York? N'ezie!
1 Ndewo New York
2 YMCA West Akụkụ
3 Obodo NY
4 Yorklọ nkwari akụ New York Moore
Ndewo New York
Hostlọ mbikọ a na-ewu ewu na dị na Upper West Side, abụọ blocks si nnukwu Central Park na nzọụkwụ si ụzọ ụgbọ oloko na n'ụzọ nkịtị na-ewe gị niile na obodo. Ọ dịkwa na nso ije nke agbata obi Harlem na Mahadum Columbia maka ama ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị maraworị ya ma ị nọrọbeghị ọtụtụ afọ, aga m agwa gị nke ahụ emezigharị kpamkpam ma taa, ọ meziwanye Wi-Fi Internet na ogige akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke dị n'etiti ogige ntụrụndụ kachasị ukwuu na obodo. Inside enwerekwa ebe a na-ere nri nke na-enye nri ụbọchị niile, enwere kichin a kwadebere nke ọma, ebe a na-asa akwa na mmemme zuru oke nke mmemme na ihe omume maka ndị njem.
Ọtụtụ ihe bụ n'efu Ebe a: nri ụtụtụ maka ndị na-anọdụ ebe obibi adịchaghị (site na akwa anọ ruo isii), igbe ahụ n'ime ụlọ, Ibé akwụkwọ, njegharị kwa ụbọchịs, na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa maka ngwa ekwentị na ngwaọrụ ndị ọzọ na WIFI Intaneti.
Ahịa? Dịka ọmụmaatụ, achọrọ m akwa maka njedebe nke May na-esote na ime ụlọ ụmụ nwanyị adịchaghị elu akwa anọ abalị na-efu 65 dollar. N’ụlọ obibi nke ndina isii, ọnụego ahụ na-adaru na $ 61, n’ime iri ruo 56 na na 12 ọ bụ $ 54. N'ihe banyere ime ụlọ kachasị mma, ọnụego ahụ gụnyere nri ụtụtụ na otu ụzọ ntụgharị maka ịsa ahụ.
N'ikpeazụ, ụlọ mbikọ amụma na-egosi na i nwere ike na-anọ ruo abalị 20 kwa afọ.
YMCA West Akụkụ
Enwere ọtụtụ ngalaba YMCA na nke a ọkachasị dị na West 63rd na 5th Street. YMCA bụ nzukọ na-enye ọtụtụ ọrụ na oghere maka obodo yana n'etiti ọrụ ndị ahụ enwere mgbe niile ụlọ maka ndị njem / ndị ọbịa.
Ha na-eche banyere inwe ndị ọrụ enyi na ịnye ezigbo ahụmịhe na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. N'ihe banyere alaka ụlọ ọrụ dị na Akụkụ ọdịda anyanwụ ọ dịkwa na ya dị nnọọ nso na ogige ntụrụndụ, n’akụkụ nke ọzọ nke Lincoln Center, na nnukwu agbata obi na ụlọ mmanya, ụlọ ahịa na ịnweta njem dị mfe. Ndi nọrọ n’ime ụlọ ha ga - ahụ ime ụlọ dị ọcha, ntụ oyi, Free WiFi na ihicha ọrụ.
Enwere otu na ime ụlọ ihi ụra abụọ ma na-enye a mgbatị, Cafe, ọdọ mmiri abụọ na ime ụlọ nwere egwuregwu na egwu. N’ụzọ doro anya, echiche a na-abụ mmekọrịta oge niile.
A na-akwalite ụlọ mbikọ a dị ka "enyi gị na New York", a mma, dị ọcha ma mara mma ebe ịrahụ n’otu n’ime obodo ndị kachasị mma n’ụwa. Ọ dị na Queens, dị nnọọ ole na ole nke ụzọ ụgbọ oloko si Manhattan na Brooklyn.
Maka enyemaka WIFI n'efu, a super full mmanya, kọmputa na na-ebi akwụkwọ, a kichin, ibu akpa, ihe owuwu ụzọ mbata, safes na ụlọ nke nwoke na nwanyị kewara. Enwere ulo obibi, ime-ulo nke ano na nke ime-ime.
A na-ekewa akwa ndị dị n’ime ime ụlọ ndị a na-ehi ụra n’ime ogwe, akwa ọ bụla nwere plọg ya, akwụkwọ ọgụgụ ya na ebe ịhapụ ihe n’aka. Ime ụlọ ọ bụla nwere ụlọ ịsa ahụ nke ya, ọ bụghị obere ime ụlọ nwere ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe. Ogwe ahụ na-enye kọfị na mmanya na nri ụtụtụ kwa ụtụtụ. Ọ bụrụ na ị gaa na weebụsaịtị ha, ị ga-ahụ akwụkwọ ozi ahụ dum.
Ahịa? Gbakọọ ụfọdụ $ 60 kwa abalị.
Yorklọ nkwari akụ New York Moore
Ọ bụ ụlọ mbikọ na ime ụlọ elu, saa mbara. Ọ na-emi odude ke East Williamsburg, na obi nke Brooklyn Ma ọ bụghị ọnụ ala mana ọ bụ otu n’ime ihe kachasị mma. Gburugburu ya enwere ụlọ oriri na ọ artụ ,ụ, veranda art, ụlọ mmanya, ụlọ nri, ụlọ ahịa na nnukwu abalị mgbe anyanwụ dara. Ọ bụ ụmụnna atọ na-ejegharị ejegharị
Hostlọ mbikọ a bụ njem dị nkeji ole na ole site n'ọtụtụ ọdụ ụgbọ oloko na ngbanwe ị batara naanị nkeji 15 na Union Square, na Manhattan. Ndị ọrụ ya nwere ezigbo enyi, na-asụ ọtụtụ asụsụ ma ị ga-enwe ahụ iru ala. Enwekwara WiFi n'efu n'ogologo ụlọ na na ụlọ ndị nkịtị ma ọ bụ nke onwe. N'okwu nke ụlọ obibi na-agwakọta ma enwekwara naanị nwanyị.
Ime ụlọ ọ bụla nwere ime ụlọ ịwụ ahụ, ha nwere uko ụlọ dị elu ma na-enwu gbaa. E nwere igbe n'ime ha ebe ndị ọbịa nwere ike ịchekwa ihe nke aka ha ma kpọchie mkpọchi maka $ 3 ma ọ bụrụ na ịnweghị nke gị. Imirikiti ọnụ ụlọ anaghị enwe akwa akwa kama ọ bụ obere Twin ma ọ bụ Queen size akwa (ọ bụghị ihe ọjọọ). N'aka nke ọzọ, ụlọ mbikọ ahụ nwere ime ụlọ atọ nwere ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe mana ndị a na-enyekwa akwa nhicha ahụ, akwa na kpo oku ma ọ bụ ntụ oyi.
Ime ụlọ ọ bụla nwere akwa atọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihi ụra, ị ga-akwụ ụgwọ naanị maka atọ. Ọ bụrụ n’ị na-eme njem n’otu buru ibu, enwekwara ime ụlọ nkeonwe maka isii mana ị ga-ebu ụzọ gwa ya tupu oge eruo. Ahịa? Ichekwa akwa na ebe ndina 2018-bed shared for May XNUMX pricegwọ bụ maka abalị anọ bụ dollar 250. Hostlọ oriri na ọuteụ cụ a mara mma dị na 179 Moore Street na Brooklyn.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ọtụtụ nhọrọ mgbe a bịara na gọọmenti rụrụ na New York. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọnụahịa dị $ 60, ọ bụ ezie na enwere ike ịchọta saịtị dị ọnụ ala, ọ ga-adịrị gị mfe iji gbakọọ na ọnụego ahụ. Ihe kachasị mma bụ iche echiche banyere ihe ịchọrọ ime, ihe ịchọrọ ịmara na otu ị chọrọ isi kwapụ ebe ị ga-ahụ ụlọ mbikọ nso. Jisie ike!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » New York » Ndị gọọmenti rụrụ na New York